Marka laga reebo cusbooneysiinta macOS High Sierra, Apple waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta Safari ee El Capitan iyo Sierra | Waxaan ka socdaa mac
Dhibaatooyinka sii socda ee Apple ay la kulantay bilihii la soo dhaafay ayaan u oggolaan shirkadda ku taal Cupertino inay sanadka si fiican u dhammeyso. Haddii ka hor dhammaadka sannadka uu ahaa Apple oo had iyo jeer ku jiray bushimaha qof walba, hadda waa Intel oo nuglaanta daran ayaa ah ayaa laga helay inta badan processor-radooda.
Sidii la filaayey, soosaarayaasha waaweyn ee softiweerku waxay u badan yihiin kuwa ku khasbanaaday inay shaqo galaan si ay isugu dayaan inay baaraan dayacnaantaas oo kumbuyuutar kasta iyo adeege kasta oo adduunka ah baaray. Apple ayaa soo saartay macOS High Siera 10.13.2 cusbooneysiin loogu talagalay kombiyuutarada ugu casrisan, laakiin ma ahayn kan kaliya.
Ragga ka socda Cupertino waxay kaloo xasuusteen in maanta suuqa aan ka heli karno tiro aad u tiro badan oo ah Macs, tiro aad u tiro badan, oo weli si buuxda u shaqeynaya. Si aan dhinac looga tegin oo ay dhibaato mustaqbalka la soo daristo dhibaatooyin xagga nuglaanta ah ee lagu arko processor-yada Intel, waxay sii deysay Safari 11.0.2 oo loogu talagalay macOS Sierra iyo OS X El Capitan, noocyada nidaamyada hawlgalka Apple ee Waxay suuqa ku dhufteen 2016 iyo 2015 siday u kala horreeyaan.
Cusboonaysiinta 'Safari' ee nooca 11.0.2 waxaa si toos ah looga heli karaa iyada oo loo marayo Mac App Store isla markaan rakibno uma baahnid inaan dib u bilowno Mac-ga, sida haddii ay ku dhacdo macOS High Sierra casriyeyntiisa amniga ee Apple ay sii deysay isla waqtigaas oo ah midka lagu hagaajiyay OS ka duqoobay. Dhammaan cusboonaysiintaani waxay ka yimaadaan gacanta cusbooneysiinta iOS illaa 11.2.2 ee labada iPhone iyo iPad, oo ay ku jiraan hagaajinta amniga, sidaas darteed sidoo kale laguma talin oo keliya, laakiin waa qasab in lagu rakibo sida ugu dhakhsaha badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » Marka laga reebo cusbooneysiinta macOS High Sierra, Apple waxay sii deyneysaa cusbooneysiinta Safari ee El Capitan iyo Sierra
"Waan ku faraxsanahay inaan kula kulmo" waa fariin soo dhaweyn ah oo ka socota South Korea dukaanka Apple Store
Amni aad u daran oo leh iStorage diskAshur 2 SSD, oo ku habboon macOS